Amanqaku ka-Alice Jones Martech Zone |
Amanqaku ngu UAlice Jones
UAlice Jones uyintengiso yedijithali evela eSan Francisco, California. Ubhala iiposti zebhlog zezona zilungileyo qalisa iinkonzo kunye neearhente zokudala umxholo. UAlice ngumama wabantwana abancinci kunye nengcali yeyoga enomdla.
Intengiso yaBantu kuThengiso loMxholo: Iingcebiso ezi-4 namaqhinga
NgoLwesibini, Matshi 24, 2020 NgoLwesibini, Matshi 24, 2020 UAlice Jones
Ukuthengisa umxholo ukuyo yonke indawo kwaye kuya kusiba nzima ukuguqula amathemba kubathengi abasisigxina kwezi ntsuku. Ishishini eliqhelekileyo alinakufezekisa nantoni na ngeendlela zokupasa ezihlawulelweyo, kodwa linokukhulisa ngempumelelo ulwazi kunye nokuqhuba ingeniso lisebenzisa intengiso yemveli. Ayisiyongcinga intsha le kwi-intanethi, kodwa uninzi lweempawu zisasilela ukuluxhaphaza ngokupheleleyo. Benza impazamo enkulu njengoko intengiso yemveli ibonisa ukuba inye